12 Job wee zaa, sị: 2 “N’ikwu eziokwu, unu bụ ọkaibe, Amamihe ga-eso unu nwụọ!+ 3 Mụ onwe m nwekwara obi na-aghọta+ ihe dị ka unu nwere. Unu akaghị m,+ Olee onye na-amaghị ihe ndị a? 4 Aghọworo m mmadụ ibe m ihe ọchị,+ Bụrụkwa onye na-akpọku Chineke ka ọ za ya.+ Onye ezi omume, nke a na-apụghịkwa ịta ụta, aghọọla ihe ọchị. 5 Onye na-enweghị nchegbu na-elelị ọdachi anya,+ Na-eche na ọ bụ ndị ụkwụ ha na-ama jijiji ka a kwadebeere ya.+ 6 Ụlọikwuu nke ndị na-ebukọrọ ihe mmadụ na-adị jụụ,+ Ndị na-akpasu Chineke iwe na-anọkwa n’udo, Bụ́ udo nke onye ji aka ya meere onwe ya chi na-enwe.+ 7 Otú ọ dị, biko jụọ anụ ụlọ, ha ga-ezikwa gị ihe;+ Jụọkwa anụ ufe nke eluigwe, ha ga-akọkwara gị.+ 8 Ma ọ bụ, gosi mmasị n’ebe ụwa dị, ọ ga-ezikwa gị ihe;+ Azụ̀ ndị dị n’oké osimiri+ ga-akọkwara gị ya. 9 Olee nke n’ime ihe ndị a niile nke na-amaghị nke ọma Na ọ bụ aka Jehova mere ihe a,+ 10 Onye mkpụrụ obi nke onye ọ bụla dị ndụ dị n’aka ya,+ Tinyere mmụọ nke anụ ahụ́ niile bụ́ mmadụ?+ 11 Ntị ọ́ dịghị anwale okwu+ Dị ka okpo ọnụ+ si anụ ụtọ ihe oriri? 12 Ọ̀ bụ na amamihe adịghị n’etiti ndị agadi,+ Ọ̀ bụ na nghọta adịghịkwa n’ogologo ndụ? 13 Amamihe na ike dị n’aka ya;+ Ndụmọdụ na nghọta bụkwa nke ya.+ 14 Lee! Ọ na-akwatu ihe, a ghara iwulite ya;+ Ọ na-emechibido mmadụ ụzọ, a ghara imeghe ya.+ 15 Lee! Ọ na-akpara mmiri ókè, ha ewee takọọ;+ Ọ na-ezipụkwa ha, ha ewee gbanwee ala.+ 16 Ike na ezi amamihe dị ya n’aka;+ Ọ bụ ya nwe onye na-emehie ihe nakwa onye nduhie;+ 17 Ọ na-eme ka ndị ndụmọdụ gbara ụkwụ ọtọ,+ Ọ na-emekwa ka ndị ikpe na-ezuzu ezuzu. 18 Ọ na-atọpụ agbụ ndị eze,+ Ọ na-ekekwa ha ájị̀ n’úkwù. 19 Ọ na-eme ka ndị nchụàjà gbara ụkwụ ọtọ,+ Ọ na-akwatukwa ndị nọsiri ike;+ 20 Ọ na-anapụ ndị a tụkwasịrị obi okwu, Ọ na-anapụkwa ndị agadi ezi uche ha; 21 Ọ na-eleda ndị a ma ama anya,+ Ọ na-eme ka ihe ndị dị ike kere n’úkwù ghara isikwa ike; 22 Ọ na-esi n’ọchịchịrị kpughee ihe omimi,+ Ọ na-emekwa ka ìhè nwuo n’ebe gbara oké ọchịchịrị; 23 Ọ na-eme ka mba dị iche iche dị ukwuu, ka o wee bibie ha;+ Ọ na-emekwa ka mba dị iche iche gbasaa, ka o wee chịrị ha pụọ; 24 Ọ na-anapụ ndị isi nke ndị nọ n’elu ala uche ha, Ka o wee mee ka ha wagharịa n’ọzara,+ n’ebe ụzọ na-adịghị. 25 Ha na-asọ ìsì n’ọchịchịrị,+ n’ebe ìhè na-adịghị, Ka o wee mee ka ha na-adagharị dị ka onye mmanya na-egbu.+